Fandraharahana ara-kolontsaina: mitodika amin’ny tanora ny Tosik’Art | NewsMada
Fandraharahana ara-kolontsaina: mitodika amin’ny tanora ny Tosik’Art
Roa taona lasa izay, nikarakara ny “Tosik’Art” ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina (MSK). Naka endrika fifaninanana tetikasa manodidina ny fandraharaharana eo amin’ny sehatry ny kolontsaina izany, ka nanomezana tohana ara-bola sy ara-kevitra ireo tetikasa voafidy. Roa taona taty aoriana kosa, nampisalorana ny Ivontoeram-pikotrehana orinasa ara-kolontsaina ho an’ireo tanora izy ity.
Nisantatra ny ivontoerana Tosik’Art ny any Toamasina, izay notokanana ny 29 mey lasa teo. Hanome fiofanana fototra ireo tanora liana, araka izany ny MSK, ampian’ny eo anivon’ny METFP. Fanamby ny hanome tanana ireo tanora, miainga hatrany amin’ny famoahana ny hevitra famoronana hananan’izy ireo, ny fanoratana ny drafi-pandraharahana (business plan) ka hatrany amin’ny fanamasahana ny tetikasa ho lasa azo ikarohana famatsiam-bola any amin’ny banky.
Ankoatra an’i Toamasina, efa nankatoavin’ny Filankevitry ny minisitra farany teo ny hananganan’ny MSK ny Tosik’Art any amin’ny renivohi-paritra 9 ( Maevatanana, Antsirabe, Tsiroanomandidy, Mananjary, Miarinarivo, Ihosy, Sambava, Ambovombe, Taolagnaro) hafa amin’ity taona 2021 ity.